Obodo na-aga na nlegharị anya na Nyefee ọrụ Basel -
Ọ bụghị naanị ndị ahịa anyị ahịa - yana ezinụlọ na otu dị iche iche ruo ndị mmadụ 7 - anyị na-enye ohere nke ịga njem dị mma na otu n'ime anyị ndị limousine mara mma ma mara mma on.
Karịsịa n'ime ọnwa okpomọkụ, Basel na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta chọrọ ịchọpụta obodo ndị gbara ya gburugburu na Switzerland, France na Germany. N'ihi ọnọdụ anyị magburu onwe ya, anyị nwere ike ime njem njem obodo gị dị ka nke ọma dị ka o kwere mee. Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-azụ ahịa nwere ohere ijikọta azụmahịa na nzuzo na ndị njem anyị nwere ahụmahụ na-eduzi anyị pụọ ná nrụgide nke azụmahịa na nchọpụta ọha na eze, ọ bụghị naanị nlegharị anya, kama enyemaka ndị enyemaka ole na ole. gosi.
Ọrụ Limousine maka njem nlegharị anya kachasị mma na Europe
Ọkwọ ụgbọala anyị na-eduzi gị ọ bụghị naanị na nkasi obi, kama ọ na-eduzi gị, jiri akọ na n'enweghị nsogbu gaa ebe ị na-aga. Site na Basel, a na-enyocha ebe dịgasị iche iche na ala ị ga-ahọrọ.
Discover Zurich si limousine
Na akwa Ị nwere ike iji obi ụtọ na-eji ụgbọ elekere elekere elekere hour si na Basel gaa Zurich n'otu n'ime ebe ndị German anyị. Na mgbakwunye na n'okporo ámá ndị mepere emepe na obodo Rom mbụ, ụlọ ọrụ kachasị mma nke oge a na Europaallee na nnukwu nchịkọta nke akụkọ ihe mere eme na Switzerland na-echere gị ebe a na-ewu ụlọ nke Landesmuseum Zurich. N'ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, windo gọọmenti nke Chagall a na-ahụkarị na Frauenmünster dị na Zurich bụ ihe a na-apụghị ichefu echefu maka onye ọbịa ọ bụla.
Ị ga-achọ ijikọta njem njem obodo gị na Zurich na ahụmahụ zuru ezu nke ịzụ ahịa? Ezi echiche! Zurich na-ewu ewu na ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa nile maka ụlọ ahịa ya, ụlọ ahịa pụrụ iche na ụlọ ahịa nke ndị na-emepụta ihe. N'etiti ndị ọzọ, Christa de Carouge, Front Front, Hannes B. na Könix nọ n'ụlọ ebe a ma jiri ụdị uwe, akwa na akpụkpọ ụkwụ na-ewuli elu. The Casino Switzerland na Zurich nwere ihe ịtụnanya na-esote ihe omume dị egwu na ọtụtụ egwuregwu na tournaments. Maka ndị buru ibu na ndị na-agba bọl, Zurich na-akpọ gị òkù na FIFA World Football Museum.
Njem obodo gaa Mulhouse Ville na limousine
French Mulhouse - ihe dịka ọkara otu awa site na Basel - na Basel na Freiburg na ọdụ ụgbọelu EuroAirport. Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-azụ ahịa mgbe nile na-eji ọrụ nnyefe anyị si na Basel Airport ruo ebe azụmahịa nke Mulhouse Ville na Alsace. Obodo nke dị n'ógbè ahụ dị nso na-emeri karịsịa na 18. Century dị ka onye ọsụ ụzọ nke mmemme mmepụta ego nke French na ụlọ ọrụ ntanetị ya dị oke mkpa. N'elu ndị ọrụ 10.000, Peugeot bụ onye ọrụ kachasị ukwuu na Alsace. Mulhouse Ville nwere ihe ngbanwe di iche iche di iche iche n'etiti ihe ncheta ulo oru ihe mere eme na nzuko nke ndi ochie na iwu ndi mmadu, ihe ndi na-ewu ewu na-ewu ewu, na ihe ndi a ma ama National Museum Cité de l'Automobile.
Na mgbakwunye na obodo ndị dị na Switzerland, Germany na France, anyị onwe anyị na-enyekwa gị obodo ndị ọzọ. Ị ga-ahụ ndepụta nke ebe ahọpụtara na ebe nrụọrụ weebụ anyị, ebe ị ga-ahụkwa ọnụahịa maka nnyefe ụgbọ elu anyị. Anyị na-atụ anya nke gị online ntinye akwụkwọ ma ọ bụ oku ị na - akpọ + 41 78 861 35 50.
Edere na: Ụgbọ okporo ígwè Basel ọdụ ụgbọ Shuttle limousine ọrụ obodo oge izu
taxi.flughafen April 6, 2017 April 6, 2017 Uncategorized Enweghị ihe ọ bụla
← 2018 BASELWORLD - Na-aga njem na Basel Service